यसरी भएको थियो, संसद् पुन:स्थापना
यसरी भएको थियो, संसद् पुन:स्थापना जगत नेपाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गराएको दुई महिना हुन लाग्यो । संविधानविपरीत भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि बहस जारी छ । फैसला कस्तो आउने हो ? नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टुङ्गो कसरी र कहिले लाग्ने हो ?
यस्तै अन्योलबीच घोषित मितिमा (वैशाख १७ र २७ गते) निर्वाचन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने संशय कायमै छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको छिट्टै किनारा लागे पनि दुई महिनाको अवधिमा चुनाव गराउने काम निर्वाचन आयोगका लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञहरुको ठहर छ । प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुने तर चुनाव हुन नसक्ने परिस्थिति बनेमा त्यसले वर्तमान व्यवस्था र संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्नुका साथै राजनीतिक अस्थिरता पनि निम्त्याउनेछ र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै गम्भीर असर पर्ने डर छ ।
अतः वर्तमान संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सही बाटामा ल्याउन विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
नेपाली राजनीतिमा हामीले पन्ध्र वर्षअघि पनि यस्तै स्थितिको अनुभव गरिसकेका छौँ । कुरा २०५९ सालको हो । नेपाली कांग्रेसभित्रको खिचातानी चरममा रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद् विघटनको सिफारिस गरिदिए ।
संसद् विघटन नहुँदासम्म देउवा र दरबारको एउटै लाइन थियो – कोइरालालाई कमजोर बनाउने । तर सदन विघटन भएपछि राजाले २०५९ असोज १८ मा जननिर्वाचित देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरी कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए । अनि राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र फेरि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । दलहरुलाई खेलाउँदै आफ्नो अधिकार बढाउने दरबारको रणनीति २०६१ माघ १९ गते उत्कर्षमा पुग्यो । प्रधानमन्त्री देउवालाई बर्खास्त गरी राजा आफैँ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भए ।
तत्कालीन देउवा सरकारका मन्त्री तथा वर्तमान उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल आफ्नो पुस्तक ‘माघ १९’ मा लेख्छन् – संसद् विघटनभित्रको दरबारिया षड्यन्त्रलाई हामीले देख्नै सकेनौं । त्यस प्रसंगमा हामी केबल संविधानको निर्जीव व्याख्यामात्र गर्न पुग्यौँ । त्यस बेला हामीले संसदीय निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमत प्राप्त हुने आशा मनमा राखेर संसद् विघटनको घटनालाई बुझ्न र प्रस्तुत गर्ने खोज्याैँ । प्रतिगमनका भ्रुणहरु (जेनसिस्) कसरी विकसित हुँदै गएका थिए भन्ने कुरालाई हामीले त्यसबेला देख्नै सकेनौ, बुझ्नै चाहेनौ । अझ हामीहरुमध्ये कतिपयले त संसद् विघटनको विषयलाई स्वागत समेत गर्न पुग्याैँ । संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको आवरणलाई प्रयोग गरेर संसद् विघटन गराएपछि घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नदिने आफ्नो कुटिल र प्रतिगामी योजनालाई राजाले अघि बढाएका थिए । यसका लागि राजाले सबै राजनीतिक दल, समूहमात्र होइन माओवादीसमेत गोटी बनाए ।